Sidee Loogu Soo Degsado Muusikada YouTube-ka Si Loogu Sameeyo USB-ga Barnaamijyo la'aan ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo soo degsadaa muusigga YouTube-ka USB-ga bilaa barnaamijyo?
Waxaa laga yaabaa 9, 2021 0 comments 510
Waxaa jira qaab fudud oo lagu soo dejiyo a video ama MP3 ah You Tube, adigoon u baahnayn inaad barnaamijyo ama codsiyo ku rakibto biraawsarka, oo boos ka qaadan kara kombuyutarkaaga. Tani waa hawl fudud oo lagu dhammayn karo iyada oo loo marayo barnaamijkan fiidiyowga ah, maadaama ay tahay il aan la koobi karin oo muusig ah.
Waxaad Tube waxaa ka buuxa fiidiyowyadii ugu dambeeyay ee ka yimid fannaaniinta iyo kooxaha ugu caansan adduunka, iyo weliba bandhigyada tooska ah ee tooska ah iyo malaayiin daboolida fanaaniinta hibada leh, kuwaas oo raadinaya joogitaanka baraha bulshada. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira fiidiyowyo muusig oo ah fannaaniin bilow ah oo xiiseynaya inay soo bandhigaan shaqadooda.
Muusikada ka soo degsanaya You Tube
Mid ka mid ah beddelka shabaqa si aad uga soo dejiso muusikada You Tube ilaa USB barnaamijyo la'aan waa bogga Musicail.com, oo u shaqeeya sidii You Tube video / audio recorder. Mashiinka raadinta, waxaad sahamineysaa heesta aad rabto inaad kala soo baxdo MP3 oo u ogolow bogga Musicail.com inuu sameeyo shaqadiisa soo dejinta.
Nidaamku waa sahlan yahay, kaliya waa inaad ku xirtaa qalab macruufka ah kumbuyuutar oo leh fiilada USB ka dibna waxay ku siinaysaa "click"In" lagu kalsoonaado "iPhone-ka. Kadibna waa la siiyaa "dhagsii daaqadda "soo degso" oo sug inta hawsha oo dhan la dhammaystirayo. Nidaamku wuxuu qaadan doonaa oo keliya dhowr ilbiriqsi, way fududahay oo wax dhib ah ma leh, taas oo faa'iido weyn u ah dad badan.
Khatarro aad u yar ayaa ku haya kombuyutarkaaga
Waxaa muhiim ah in laga fiirsado haddii ay jiraan qataraha ka imanaya kombiyuutarka marka aad kuwan fulineyso degargas. In kasta oo halista waxyaabaha xunxun ay tahay qatar qarsoon, nasiib wanaag barnaamijyada antivirus waxay la qabsadaan oo si dhakhso leh u ogaadaan hanjabaadaha suurtagalka ah, taas oo macnaheedu yahay in noocyada soo degsashada ah la ilaalin karo oo aysan ku lug laheyn khataro sare.
Kale kale oo deg deg ah soo degso
Horumarka adduunka xisaabinta Maalmahan, waxay kuu oggolaanayaan inaad muusikada iyo fiidiyowyada kala soo baxdo You Tube, adigoon horay u sii rakibin barnaamijyada kombiyuutarkaaga. Beddel kale oo sheeko ah waxaa bixiya FLVTO.biz.es, halkaas oo ay tahay inaad gasho daaqadda si aad uga soo dejiso codka fiidiyowga You Tube. Halkaas waa inaad gashaa cinwaanka fiidiyowga You Tube.
Gaar ahaan halka ay ku qoran tahay: "Xiriirinta faylka warbaahinta", waa inaad dhajisaa URL-ka fiidiyowga You Tube ee aad rabto inaad u beddesho feyl MP3 ah. Ka dib, waa inaad doorataa qaabka, adigoo dooranaya MP3 xagga hoose. Ugu dambeyntiina waa la siiyaa "click"Si" loo beddelo "shabakadduna waxay ku shubi doontaa ilbidhiqsiyo gudahood. Ku audio Waxaad ka heli kartaa fiidiyowga YouTube-ka galka "soo degsashada".
Nidaamyadan waxaad ku heli kartaa Cajaladaha Tubada ee aad dooratay, iyada oo loo marayo bogagga gebi ahaanba bilaashka ah oo ku habboon in la isticmaalo, iyada oo aan waxyeello loo geysanin booska ama xawaaraha socodka kombuyuutarkaaga. Soo dejinta muusigga waxaa lagu fulin doonaa iyada oo aan wax dhibaato ah loo helin kuwa xiiseynaya in lagu soo dejiyo heesahan USB-ga, laakiin aan rabin inay isticmaalaan barnaamij gaar ah.
1 Muusikada ka soo degsanaya You Tube
2 Kale kale oo deg deg ah soo degso
Sidee loogala soo baxaa maqallada adiga Tube?
Sidee ayaad u shaqeysaa tubada?